I-StreamMaster PRIME ibonelela ngokulula kwimizobo, umdlalo wesitayile sokudlala kunye nezixhobo zokulawula inkosi | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Okufumaneka » I-StreamMaster PRIME ibonelela ngokulula kwimizobo, umdlalo wesitayile sokudlala kunye nezixhobo zolawulo lwenkosi
Iplagi yokutshintsha iplagi yokutshintsha, imizobo kunye neseva kulwakhiwo lwelifa
Amandla ePixel, inkokheli yehlabathi ekudlaleni, kwimishini nakwimizobo, yongeze i-StreamMaster PRIME kuluhlu lwayo lwemizobo kunye nemidlalo yokudlala. Sebenzisa i-StreamMaster Media Processing yeqonga lobuchwephesha, i-StreamMaster PRIME sisixhobo esitshintshayo kunye nomsebenzi oguqukayo, owenzelwe ngokukodwa ukubuyisela izixhobo ezizodwa kulwakhiwo lwendabuko.
"Abasasazi abaninzi esithethe nabo basixelele ukuba abakabikho kwimeko yokufudukela kuyo yonke into entsha, eyinxalenye yesoftware, kodwa izinto ezizezabo zifuna ukubekwa endaweni yazo," ucacisile uJames Gilbert, CEO we Amandla ePixel. “I-StreamMaster PRIME ibanika isixhobo esinye, esineendleko ezifanelekileyo, ukudibanisa ngaphezulu kwe-SDI, ngazo zonke izinto ezenzekelayo, ngenxa yoko kulula ukungena endaweni ye-switch-life master switcher control switch, iseva yevidiyo okanye i-graphics inserter.
"Okona kubaluleke kakhulu, iilayisensi zesoftware ye-StreamMaster PRIME ziyadluliselwa, ke xa umsasazi eqala ukufudukela kulwakhiwo olutsha okanye imodeli yokuhambisa, ukusebenza okukhoyo kunokudluliselwa ngaphandle kwendleko," wongeze watsho.
I-StreamMaster PRIME sisixhobo esizinikeleyo, esikwaziyo ukuxhasa imizobo yophawu oluzenzekelayo, ii-logo ezizinzileyo kunye nee-animated, iiwotshi, ukukhasa okubhaliweyo, iitickers, ii-DVE kunye nokunye. Okukhethwa kukho kubandakanya iserver yevidiyo yezibuko, ukuqhubekekiswa kwesandi sesandi esininzi kunye nokusebenza kolawulo lwenkosi.
Iyakwazi ukusebenza ngokuzimeleyo, kunye nezixhobo zolawulo lwe-UI zesoftware nazo ziyafumaneka. Yiplagi-kunye nokudlala nazo zonke iinkqubo ezizenzekelayo ezizenzekelayo.
"Le mpendulo ngqo kwimfuno yokwenene evela kumzi mveliso," utshilo uGilbert. Sisisixhobo esisemgangathweni esinezixhobo ezaneleyo zokuqhuba ii-software ezinokuthi zifuneke, ezilungiselelwe iimfuno zomsebenzisi. Kulungiselelwe abo bafuna ukugcina usasazo lwelifa libaleka, okanye ilori yosasazo engaphandle efuna ukudlalwa kwemizobo eshukumayo, sisisombululo esamkelekileyo. ”
I-StreamMaster PRIME iyafumaneka ngoku.
malunga Amandla ePixel, i URohde kunye noSchwarz inkampani
Amandla ePixel kuphuhlisa isoftware echaziweyo, ebonakalayo, izisombululo zosasazo lokudlala, ukuzenzekelayo, ulawulo lwenkosi, imizobo kunye nophawu olusetyenziswa kumjelo kamabonakude, i-OTT kunye neVOD. Iinkqubo zethu zokuphawula amabhaso kunye neenkqubo zokunyusa, izixhobo ezilawulayo ezisebenza ngemizobo kunye neenkqubo zemveliso zemizobo eziguqukayo ezivumela abavelisi ukuba bahambise umxholo oshukumayo wokuphila kunye nokurekhodwa kwangaphambili kuyo nayiphi na i-SD, HD, I-4k, iselula, i-intanethi okanye i-application interactive.
Amandla ePixel unamava eminyaka engama-33 yobuchule bobunjineli kunye nokuzinikela kwinkxaso yabathengi eyenze ukuba ibe lukhetho lokuqala kumzi mveliso wokudlala, kwimizobo kunye nophawu. Ngofakelo lwamawaka aliqela kwihlabathi liphela, abathengi babandakanya abasasazi abakhokelayo kwintengiso njenge-BBC, Ericsson, I-ITV, i-SWR, i-WDR, i-TV2 iNorway, i-Danmarks i-Radio, i-TV5 World, i-CBC, i-Disney, i-Discover, i-ESPN, i-ViaSat kunye ne-Sky.
Ufunyenwe ngoku URohde kunye noSchwarz GmbH, Amandla ePixel Ikomkhulu lenkampani lihlala eCambridge UK kunye neofisi zengingqi e-Grass Valley California nase-Dubai UAE.
Igama: UKara Myhill
email: k[imeyile ikhuselwe]
4K Iimpawu zoopopayi Ukulungiswa komsindo esizisebenzelayo ukusebenza ngokuzimeleyo uphawu lomjelo Amaxesha DVE Graphics HD lawula Isitshintshi soLawulo lweMater Ukudlala kwakhona kwimizobo ijelo elininzi Iimpawu ezininzi zeLog Static OTT Amandla ePixel kudlala I-Plug-ins URohde kunye noSchwarz SDI Ukudlala-software echazwe Ukusasazwa kweMedia Media I-StreamMaster PRIME Itekisi yokukhasa iikickers ijikethi IWindows Server Vod 2020-09-15
Previous: I-LWKS iqinisekisa ikamva elizimeleyo le-Lightworks NLE kunye ne-QScan AQC
next: Indebe yeNdebe yeNdlovukazi yeCartier 2020 yePoloji yeMidlalo yeyokuQala yokuQala iMidlalo yeeKhamera eziNinzi usebenzisa i-LU800 yeLiveU